KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Wokɔ Spain a, kurow a wubehu tete nneɛma ne nnipa ahorow wɔ hɔ paa ne Toledo. Afe 1986 mu no, wogye toom sɛ, aman a wɔwɔ tete nneɛma ne nsase a ɛyɛ fɛ no, Spain nso ka ho. Nkurɔfo kɔ hɔ nsrahwɛ paa
SPAIN yɛ ɔman a ɛso nneɛma gu ahorow. Wokɔ hɔ a, wubehu sɛ asase no ne nnipa no nyinaa gu ahorow. Asase no fã kɛse no ara deɛ, wɔde adua awi, bobe, ne ngodua. Sɛ wokɔ Spain anafo fam a, nea ehia ara ne sɛ wubetwa nsu kilomita 14 (kwansin 9), na woadu Afrika asasepɔn no so.
Spain da Europe anafo fam atɔe. Nnipa pii fii mmeae mmeae tu kɔɔ hɔ. Ebinom yɛ Foinikefo, Greekfo ne Carthagefo. Romafo ko faa asase no fã bi bɛyɛ mfe 200 ansa na Yesu reba. Wɔtoo hɔ din Hispania. Akyiri yi Visigotfo ne Moorfo na wɔkɔtenaa hɔ. Sɛ wokɔ hɔ nnɛ a, wubehu nneɛma bi a ɛkyerɛ sɛ wɔtenaa hɔ.
Nnansa yi ara, afe baako mu no, ahɔho bɛboro ɔpepem 68 kɔɔ nsrahwɛ wɔ Spain. Ebinom ba hɔ bɛto awia, ebinom nso bɛdeda wɔn mpoano a ɛhɔ yɛ fɛ no. Ebinom bɛhwɛ adwinni ahorow, wɔn adan ne tete nneɛma a ɛyɛ fɛ no. Spainfo aduan yɛ dɛ, na ɛka ho bi na ahɔho ba hɔ no. Wɔn nnuan no bi ne nsumnam, prakonam, forɔe papa bi, salad ahorow, ne atosode a wɔanoa anaa wɔde ngo a wonya fi ngodua mu afra. Wiase baabiara a wobɛkɔ no, nnipa pii ani gye Spainfo nnuan ho. Ebi ne wɔn nkosua a wɔakyew, ɛmo bi a wɔfrɛ no paella, ne tapas.
Mariscada yɛ Spainfo aduan a wɔde nsumnam ayɛ
Spainfo pɛ nnipa, na wɔtew wɔn anim ma obiara. Wɔn mu dodow no ara ka sɛ wɔyɛ Roma Katolekfo, nanso wɔn mu kakraa bi na ɛkɔ Mass. Nnansa yi, nnipa pii atu afi Afrika, Asia, ne Latin Amerika akɔ Spain. Wɔn mu pii ani gye ho sɛ wɔne afoforo bɛka wɔn som mu gyidi ne amammerɛ ho asɛm. Yehowa Adansefo ne wɔn mu pii abɔ nkɔmmɔ. Wɔatumi aboa wɔn ama wɔahu nea Bible ka fa nneɛma pii ho, na mfaso afi mu aba.
Afe 2015 mu no, Adansefo bɛboro 10,500 tuu wɔn ho mae maa wosii Ahenni Asa ahorow na wosiesiee bi nso. Ná ne nyinaa dodow yɛ 70. Ahenni Asa yɛ baabi a Yehowa Adansefo hyiam som. Asase no so atumfoɔ na wɔma yɛn asase ma yɛde sisi Ahenni Asa no. Spain kasa da nkyɛn a, Yehowa Adansefo yɛ nhyiam wɔ kasa bɛboro 30 mu na ama nnipa a wɔatu aba hɔ no ate ase. Afe 2016 mu no, Yehowa Adansefo yɛɛ nhyiam titiriw bi de kaee Yesu Kristo wu no, na nnipa bɛboro 186,000 na wɔkɔɔ ase.
Wiase nyinaa no, Spain na wonya ngo fi ngodua mu sen ɔman biara.
Bepɔw a ɛware paa wɔ Spain ne Bepɔw Teide. Ɛwɔ Canary Islands. Ne tenten yɛ mita 3,718. Sɛ wosusuw fi po ase a, ɛware paa. Yɛreka ogya bepɔw a ɛware paa wɔ wiase a, ɛno na ɛto so mmiɛnsa.
KASA TITIRIW: SPANISH, BASQUE, CATALAN, GALICIAN, NE VALENCIAN
EMU NNIPA DODOW: 46,439,000
WIM TEBEA: AHOHURU BERE, WIM TUMI YƐ HYEW PAA. AWƆ BERE NSO, WIM TUMI YƐ NWINI PAA
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan NYAN! Ahonhonsɛm—Hena na Ɔhyɛ Akyi?
Ahonhonsɛm—Hena na Ɔhyɛ Akyi?
NYAN! Ahonhonsɛm—Hena na Ɔhyɛ Akyi?